Iindaba - Joyina imikhosi yokulwa imeko yobhubhane
Ngemini kaFebruwari 12, u-Rao Jianming, Unobhala weqela leqela kunye nosekela sihlalo we-Jiangxi Provincial Federation yeimanyano zabasebenzi, bangena nzulu kwezonyango e-Sanxin ukuphanda ubhubhane nomsebenzi wokulawula, kwaye kwangaxeshanye wathumela i-50000 yuan induduzo imali. UZhang Yilin, ongusihlalo womphathi jikelele wenkampani, uxelele usihlalo wenkampani, uPeng Yilin, ngomsebenzi wenkampani. Wayekwalilungu leKomiti eSisigxina yekomiti ejongene neemanyano zabasebenzi kwiRiphabhlikhi yase China, uMnu Wu Yufeng, usekela sihlalo weKomiti eSisigxina yekomiti yeQela leNkongolo yabantu kwiRiphabhlikhi yase China. usekela-sihlalo weKomiti eSisigxina yekomiti ngokubanzi yemibutho yabasebenzi yeRiphabhlikhi yaseChina iinkokeli ezifanelekileyo ziyahamba nophando.
Emva kokuphanda indawo, uNobhala uRao Jianming wayexhalabile kakhulu kukhuseleko lwabasebenzi benkampani. Okokuqala, wabuza ukuba ngawaphi amanyathelo athathwe yinkampani ukunqanda nokulawula imeko yobhubhane, kwaye bangaphi abasebenzi ababuyela emsebenzini, ngakumbi kwimveliso. UZhang Lin, ongusihlalo wemanyano yabasebenzi kule nkampani, unike ingxelo eneenkcukacha nganye nganye. Ngoncedo kunye nokukhokelwa ngamasebe afanelekileyo esixeko kunye nephondo (indawo yoPhuhliso), inkampani iqale ngokusemthethweni ukuvelisa idialysate, idialyzer kunye nesirinji yesitofu ukusuka nge-31 kaJanuwari.
Emva kokumamela ingxelo yomsebenzi yenkampani kulawulo olungqongqo lwabasebenzi ngaphakathi nangaphandle kwenkampani, ukufunyanwa kobushushu bemihla ngemihla kubasebenzi, ukomeleza ukwazisa ngokuthintela ubhubhane kunye nolawulo kunye nokuhlola kwindawo, uNobhala uRao Jianming uqinisekise umoya wokuzinikela ngokungazingciyo Abasebenza phambili kwinkampani kuthintelo lobhubhane, kwaye wabongoza wonke umntu ukuba athathele ingqalelo kukhuseleko lwabo kwaye aqinisekise ukhuseleko lwabo.
Kwinkqubo yophando kunye novelwano, Unobhala uRao Jianming wagxininisa: kufuneka sidibanise iingcinga zethu kunye nezenzo zethu kumoya wenobhala jikelele wentetho ebalulekileyo ka-Xi Jinping, ukuphucula ulwazi ngokubanzi kunye nokuqonda ngokubanzi, kwaye siqonde uxanduva lokuthintela ubhubhane kunye nokulawula, kwaye Hlanganisa umkhosi oqinileyo wokulwa ubhubhane. Ngeenzame ezimanyeneyo kunye neenzame ezimanyeneyo, siya kuba nakho ukuphumelela umlo wokulwa uthintelo kunye nokulawula ubhubhane, kwaye sikhusele impilo yabantu yokhuseleko nempilo.
Ixesha Post: Jan-22-2021